HETSIKA ENY AMIN’NY COLISEUM : TSY ZAKAN’IREO DEPIOTE VITSY AN’ISA -
AccueilSongandinaHETSIKA ENY AMIN’NY COLISEUM : TSY ZAKAN’IREO DEPIOTE VITSY AN’ISA
HETSIKA ENY AMIN’NY COLISEUM : TSY ZAKAN’IREO DEPIOTE VITSY AN’ISA
26/05/2018 admintriatra Songandina 0
Maro ireo olona efa tonga saina fa tsy ilaina ny fanakorontanana eto amin’ny firenena. Tsy nitondra afatsy ny fahantrana lalina sy fahasahiranana ho an’ny firenena sy vahoaka Malagasy mantsy izany hatramin’ny androany. Takatry ny olom-pirenena ihany koa fa fitadiavan-tseza fotsiny no ao ambadik’ireo rediredy ataon’izay mandaha-teny etsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai ka mahatonga azy ireo malaina amin’ny hanaraka ireo mpitarika ny hetsika. “Toa tsy misy ventin-kevitra fa abobo no betsaka ka izay no nahatonga ahy nihemotra” hoy ny mpitolona teo aloha iray. Ary tsy izy irery fa saika ireo olona maro nandeha teny an-kianja no nahatsikaritra ny tetika maloton’ireto depiote vitsy an’isa ireto ka dia nihemotra tsy nanaraka ny “tolona” intsony. Tsy mankasitraka ny famotehana ny firenena toy izay efa nataon’ireo mpanao politika maro mantsy izy ireo fa te ahita ny firenena mandroso. Tsy hisy anefa ny fandrosoana raha tsy ao anatin’ny filaminana ka izay no nahatonga ireto olon’ny 13 Mai teo aloha ireto tonga saina, rehefa nivoaka tamin’ny fahanginany ireo Depiote maro an’isa.
Tsy mahagaga araka izany raha toa efa fantatra fa ho feno hipoka ny COLISEUM amin’ity androny ity. Lasa nivadika ho nanohana ireo Depiote maro an’isa mantsy ny ankamaroan’ireo olom-pirenenanandeha teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai tany amboalohany. Tranga izay efa tsy zakan’ireo mbola mifikitra amin’ny fanohanana ireo mpanao politika mpanimba firenena. Efa mandefa resaka mantsy izy ireo ankehitriny fa misy ny fanerena ireo mpiasa hamonjy io fanehoan-kevitra ataon’ireo Depiote maro an’isa amin’ity andro ity. Fanelezana tsaho toa miapanga tena ihany, satria ireto depiote vitsy ireto sy ny forongony no nitondra fanalahidy ka nanery ireo mpiasam-panjakana nivoaka ny fiasany, ary nanery ireny mpiasa ireny hanaraka ny dian’izy ireo amin’ny fitokonana. Izany hoe mitantara ireo zavatra nataony nandritra ity fanakorontanana ny firenena ity ireto mpanao politika ireto, saingy havadiny any amin’ireto Depiote maro an ‘isa ireto indray ny rasa. Maro amin’ireto mpitari-tolona eny amin’ny 13 Mai araka izany no mampiaka-peo ankehitriny satria efa mahatsinjo io fandresen’ny depiote maro an’isa io.
Hery Rajaonarimampianina : “Mandroso hatrany na eo aza ny mpanakorontana”
hentitra dia hentitra ny filoham-pirenena Hery Rajanaorimampianina manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny, indrindra ny fanakorontanana. Anisan ‘ny nambarany tamin ‘izany ny fanakorontanana ara toe-karena izay misy amin ‘izao fotoana izao, toy ny fanangonam-bary »ilaina ny ady ...Tohiny
Parlemanta Eoropeana : Mpanao kolikoly
Tsy nanaja ireo mpiara-mitolona : Nilaozan’ny mapar ny kianjan’ny 13 Mai